Wada sheekeysi fiidiyoow ah wada-hadal
Iyada oo taageero ka adeegyada sida "chat video la saaxiibka random" aad chat karaa via webcam qof dhinac kasta oo caalamka in waqtiga dhabta ah. Tani waxa ay ahayd mar barnaamij hal-abuurnimo ah oo soo jiitay dadka isticmaala ay la aqonsado, maxaa yeelay, in lagu sheekeysto qof magaalo kale ama xitaa dalka waa mid aad u xiiso badan.
Si aad u isticmaasho qaar ka mid ah chat video ah, waxaa lagaa codsanayaa inaad iska diiwaangeliso, taas oo qaadataa dhowr daqiiqo oo aad vremeni.Proydya diiwaan gashan, aad ku raaxaysan karaan Raalli ahaanshaha isgaarsiinta via webcam!
Talefoonada ugu caansan TOP. Wax xayeysiis ah ma jirto. Waxaa jira habka Premium. Waxaad dooran kartaa wada-hadalada magaalooyinka iyo xitaa wadamada. Waa hagaag, anigu ma dhahayo waxaad halkaas ka iibsan kartaa kood oo waxaad siisaa qof siyaada ah Premium.
Waxaa sidoo kale jira sheeko qoraal ah iyo farabadan oo ku saabsan su'aalaha la xiriira gabdhaha.
Kala hadal GYR-GYR! Sheeko fiidiyoow wuxuu ku salaysan yahay mashiinka caadiga ah ee mail.ru, oo kaliya lagu soo galo bogga. Boggani waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay fiidiyoow fiidiyow ah, laakiin qofna ma faragalin karo raadinta afduubka Ruushka ama Ukraine. Daaqad sahlan oo aad ku daawaneysid wada-xaajoodka, badhanka digniinta, wax walba waa sida ay tahay.
Wada-hadalkan waa fiidiyow-si rasmi ah oo rasmi ah oo Ruush ah waana mid ka mid ah isgaadhsiinta dhallinyarada casriga ah Wadahadalkani waa mid fudud. Laba daaqadaha ayaa kuu oggolaanaya inaad aragto naftaada iyo qofka aad wada socotaan shaashaddaada. Marka xigta, waxaa jira daaqad aad fariin u diri karto mid ama mid kale.
Sidoo kale, waxaad calaameysan kartaa jinsigaaga, iyo jinsiga qofka rafcaanka doonaya, ka dibna raadinta waxay ku koobnaan doontaa xogta aad bixisay.
Boggani wuxuu ku siinayaa fursad aad kula xiriirto websaydhada waqti isku mid ah oo leh dhowr wada-xaajood oo aan diiwaangelin. On this site aad dooran kartaa avatar, tilmaamo jinsi, da 'iyo magaalada. Adiga oo xajmooyin isku mid ah, waxaad dooran kartaa qof wada-hadal ah.
Boggan iyo sidoo kale dhammaan joornaalada kale ee fiidiyowga ayaa ku siinaya fursad aad kula sheekeysid dad cusub oo xiiso leh oo ka yimaada magaalo kasta oo ka mid ah meerkeena. Goobtan waa inaad ka baxdaa, haddii aadan ku dhicin inaad ogolaato helitaanka makarafoonka iyo shabakada kombuyuutarkaaga. Si aad u diiwaangeliso on this site waa inaad qor ciwaanka email iyo password sheeg inay soo galaan, markaas waxaad dooran kartaa shirkad wanaagsan.
Boggani wuxuu leeyahay sharciyadiisa, sidaa daraadeed, waa lagama maarmaan in la ogaado iyaga, si aysan u dhibin. Waxa kale oo aad ku dari kartaa saaxiibo jeclaa kabano, si ay isaga dhiirrigeli, waa in la yidhaahdo ammaan ah, ama qeybsanaan ku xigeenka, inaad ka cabato dhaqanka oo qudhmay ee Haguhu site a.
Wicitaankan video ayaa dhintay.
Codsigan "Video chat with the interlocutor casriga ah" wuxuu kugu caawiyay inaad hesho saaxiibo cusub ama kaliya inaad haysatid wakhti fiican. Dhamaan wixii lagaa rabay adiga ayaa ahaa inaad ku xirto webcam oo aad riixdo badhanka "bilaabida". Ka dib markaa, codsiga ayaa laguu soo xulay adiga lammaane. Haddii lammaanuhu uusan jeclayn, waxaad mar walba sii wadi kartaa raadinta qofka kale.
Codsigaan ma laha maamulayaasha, sidaas darteed kiiskani ma noqon doono mid iska difaacaya muuqaal kuwaas oo lagu arki karo dadka da'doodu ka weyn tahay 18 sano. Sida qolalka wada sheekeysiga oo dhan, waxaad isla markiiba is-dhaafi kartaa fariimaha qoraalka ah.
Codsigaan sidoo kale wuu dhintay, dadkuna waxay u guuraan adeegyo kale.
Videokoobkani waxa kale oo loogu talagalay wada-xidhiidhka adoo adeegsanaya webcam. Wax dheeraad ah - labada daaqadaha for video suuqa kala nool farriimaha u soo dirto dhinaca kale, iyo fursad ay ku heli Saaxiibkiis cusub. Easy iyo fududahay in la isticmaalo loomana baahna kahor diiwaangelinta.
Videochat - roulette, waxay ku siinaysaa fursad aad kula xiriirto dadka cusub, iyaga oo aan ka tegin gurigaaga. Ka dib markaad iska diiwaangelisid goobta, waxaad bilaabi kartaa isgaadhsiinta adiga oo gujinaya "raadinta badhanka". Sidoo kale boggan waxaad ku arki kartaa profilesda isticmaala taleefannada, kuwaas oo fududeeyn doona doorashadaada qofka wada hadlaya.
Goobtan waxaa loogu talagalay Ingiriis, sidaas darteed, dadka isticmaala kuwa aan aqoonin Ingiriisiga waxay ku adkaaneysaa inay fahmaan qaybaha fiidiyowga fiidiyowga. Videochat iyo sidoo kale wax kasta oo kuu ogolaanaya inaad beddesho fariimaha qoraalka ah, iyo sidoo kale arag qofka turjubaanka ah waqtiga dhabta ah.
Wada sheekeysiga "Waannu hadli doonaa" waxay kuu oggolaaneysaa inaad la xiriirto dadka aan aqoonta lahayn ee ka soo jeeda gees kasta oo ka mid ah meeraha. Waxaad tan ku sameyn kartaa sheeko, makarafoon ama kamarad. Adeegga boggani waa mid aad u fudud, uma baahna diiwaangelin iyo goobo kale oo lagu sheekeysto.
Adiga oo gujinaya "raadinta badhanka" badhan waxaad bilaabi kartaa inaad la xiriirto. Just "Aan ka hadalno" waxayna siisaa dadka isticmaala isgaarsiinta Vkontakte, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad iska diiwaangeliso. Ku soo wargeli boggan waa mid sahlan oo qurux badan!
Wada-hadalkan waa Ruush u dhigma sheekada roulette, adeegga ugu caansan ee loogu talagalay fiidiyowga si dhakhso ah. Raaxadeeda waxa aan qoro ka hor bilowga isgaarsiinta, sidoo kale haddii aadan u ogolaan in ay helaan codbaahiyahaaga iyo webcam - aad leedahay inuu ka tago website this.
Guud ahaan, chat ah waa mid fudud oo si sahlan loo isticmaali, wax kale website-ka ma aha, si bilow ah si ay si fudud u xalliso chat roulette qalabka.